Ibo onye odeakwụkwọ UNWTO ebubo na-eme ya onye ọka ikpe na ndị juri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ibo onye odeakwụkwọ UNWTO ebubo na-eme ya onye ọka ikpe na ndị juri
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị otu UNWTO gụnyere mba ndị otu 159, ndị otu 6 na ndị otu mmekọ karịrị narị ise na -anọchite anya ụlọ ọrụ onwe, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, mkpakọrịta ndị njem na ndị isi njem nlegharị anya mpaghara.
Onye na-ahụ maka ya bụ odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili. Ọ bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị na onye nnọchi anya Georgia, onye maara nke ọma na onye zụrụ azụ n'ịgbagharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Isiokwu a ga -egosi na ọ nweghị ihe ọ ga -atụ egwu ma ọ bụrụ na o kpebie ijikwa ụlọ ọrụ mmekọ UN a dị ka ụlọ ọrụ omekome.
Ụlọ ọrụ pụrụ iche nke UN bụ ọgbakọ mba ụwa kwụụrụ onwe ha na -arụkọ ọrụ United Nations.
Ewetara ha niile mmekọrịta na UN site na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Ụfọdụ dị tupu Agha Ụwa Mbụ. Ụfọdụ jikọtara ya na Njikọ Mba. E kere ndị ọzọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge na UN. Ndị UN mepụtara ndị ọzọ iji gboo mkpa na -apụta ma ọ na -egosi mkpa nke onye odeakwụkwọ UNWTO nọ ọdụ.
Ụwa nọ na nsogbu, ọkachasị, COVID-19 bibiri ụwa nke njem nlegharị anya. Ezigbo onye ndu na World Tourism Organisation, imekọ ihe ọnụ n'etiti UNWTO na WTTC bụ isi, mana ọ nweghị nke a na -eme kemgbe. Zurab Pololikasvili ghọrọ odeakwụkwọ ukwu na Jenụwarị 1, 2018.
Mpụ zuru okè?
Ọ bụ ihe nwute, naanị otu onye na-elekọta UNWTO, onye odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili jisiri ike kpọọ kaadị ya. Nanị nsogbu bụ, e ji aghụghọ mee ya onye isi, aghụghọ ga -eme ntuli aka, ma ugbu a ọ na -elekọta ịnụ na ikpebi mkpesa ọ bụla megide onwe ya.
Naanị akụkụ dị mwute bụ, na ọtụtụ mba ndị otu UNWTO nwere ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha agaghị emetụ okwu a aka. Mba ndị ọzọ aghọtaghị ya, ole na ole nwere ike ha agaghị eche.
Maazị Zurab Pololikasvili yikarịrị ka ọ gaghị abụ odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikasvili taa, ma ọ bụrụ na emere ntuli aka nke 2018 n'ụzọ ziri ezi yana site n'iwu.
Ọ na -aghọ iwu doro anya mebiri na nzukọ ọgbakọ Executive 2017 na Madrid, na ọzọ na Mgbakọ General na Chengdu na 2018, na -enye ohere A ga -ahọpụta Zurab Pololikasvili na nke abụọ ka akwadoro. Ọ nwere ike bụrụ mpụ zuru oke.
Omume mkpebi ahụ mere n'ehihie mgbe onye odeakwụkwọ ukwu bụ Dr. Taleb Rifai kpachaara anya kọwahie ya site n'aka onye ndụmọdụ gbasara iwu onye mechara nweta nkwalite dị ukwuu site n'aka onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a. Zurab Pololikasvili.
Mgbe afọ 3 gasịrị eTurboNews mechara nweta nyocha nke usoro a ma na -eme atụmatụ ibipụta ya n'izu a.
Mba dị iche iche na -eziga UNWTO ego ndị otu na Madrid. Ha na -eziga ya na nzukọ nke otu onye na -arụ, ọtụtụ na -asị na -agba maka ọdịmma nke ya, Zurab Pololikasvili. Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ Zurab Pololikasvili nwere ike ịbụ ịbụ Prime Minister nke Georgia.
Zurab Pololikasvili bụ naanị onye na -eleghara ụlọ ọrụ mmekọ UN anya kamakwa ọ bụ onye ga -enwe mkpebi ikpeazụ n'okwu ma ọ bụ mkpesa niile. Ọ bụ onye ọka ikpe na ndị juri na UNWTO. Kọmitii na -ahụ maka UN abụghị maka UNWTO.
Gịnị ka ọ pụtara?
Agbanyeghị na okwu igwu wayo na ntuli aka 2017/18 ga -ebute n'ihu, ọ nweghị nsonaazụ ọ bụla nye onye ebubo n'oge a.
Naanị nsonaazụ ga -abụ maka UNWTO General Assembly n'afọ a ịjụ nkwenye nke Zurab Pololikasvili maka oge onye odeakwụkwọ ukwu ga-amalite na 2022.
Amabeghị mgbe na ebe ọgbakọ ọgbakọ a ga -eme. Atụmatụ GA maka October na Morocco na -adịwanye anya.
Nke a nwere ike ịbụ atụmatụ kpamkpam. N'inwe ọtụtụ mba ndị otu Afrịka, ha nwere ike ha agaghị enwe ike iziga onye ozi na Madrid, ma ọ bụrụ na emegharịrị ihe omume ahụ ebe UNWTO bụ isi ya Nkwenye ga -adị mfe karịa na mba ole na ole na -aga mgbakọ izugbe.
Ọ bụ naanị ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa na Mgbakọ General Morocco, ọ nweghịkwa ihe akwadoro ma ọ bụ kwupụta. Nke a nwere ike ịbụ atụmatụ atụmatụ atụmatụ ọdịnihu Zurab Pololikasvili.
Kedu ihe ị ga -eme mgbe enwere okwu na UN Agency?
Officelọ Ọrụ Mba Ndị Dị na Nlekọta Ọrụ nke United Nations bụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha na Ọfịs United Nations nke ọrụ ya bụ "inyere onye odeakwụkwọ ukwu aka ịrụzu ọrụ nlekọta nke ime ya n'ihe gbasara akụrụngwa na ndị ọrụ nke nzukọ a.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ a enweghị ikike na ụlọ ọrụ jikọtara UN, gụnyere World Tourism Organisation (UNWTO)
Kedu ihe bụ ụlọ ọrụ mmekọ UN dịka UNWTO?
Usoro UN mejupụtara isi odeakwụkwọ yana ego na mmemme na ụlọ ọrụ pụrụ iche.
Dịka ọmụmaatụ, ego na mmemme gụnyere United Nations Children's Fund na United Nations Development Programme, nke nwere bọọdụ ndị isi na ndị isi mana ha nọ n'okpuru ikike nke odeakwụkwọ ukwu nke UN. N'ụzọ dị iche, ụlọ ọrụ pụrụ iche, dị ka Food and Agriculture Organisation, World Tourism Organisation (UNWTO) nwere ndị na-achị achị na ndị isi na-anọghị n'okpuru ikike nke odeakwụkwọ UN.
Ụlọ ọrụ ndị ahụ, nke bụ òtù mba ụwa nwere onwe ha n'ụzọ iwu kwadoro nwere iwu nke ha, ndị otu ha, akụkụ ahụ ha na ego ha, ka e webatara mmekọrịta ha na United Nations site na nkwekọrịta nkwekọrịta.
The World Tourism Organisation bụ ụlọ ọrụ United Nations na -ahụ maka ịkwalite njem nlegharị anya nke nwere ọrụ, na -adigide, na nke ụwa niile nwere ike ịnweta
Onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO bụ onye isi nke ụlọ ọrụ njikọta UN a nọọrọ onwe ya. Ihe ọ pụtara:
Mkpesa gbasara aghụghọ, nrụrụ aka na wayo na ntuli aka UNWTO na 2017/18 ka ndị ebubo ga -ekpebi.
Mkpesa na ihu ọma na odeakwụkwọ ukwu UNWTO na 2021 ga -abụ onye ebubo ga -ekpebi.
Ọ bụ ihe nwute, UN agaghị ele ụdị mkpesa a. N'ime ezinụlọ UN, ụlọ ọrụ pụrụ iche nweere onwe ha, enweghị ọkwa. UN n'onwe ya enweghị ikike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Unit Inspection Unit, nke bụ otu jikọrọ sistemụ UN nwere ike lelee ya. Ọ ga -abụ ihe na -agaghị ekwe omume ka ahụ a tinye aka na ya, ọ na -agwa UNWTO n'onwe ya, na onweghị onye ọzọ.
Nọrọ na -ege ntị maka akụkọ na -abịa n'ihu eTurboNews gbasara okwu a.
Mary Tomita ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 30, 2021 na 05:45
Biko wepu aha m n'akwụkwọ.